Ihe Nlereanya Ịgba Cha Cha N'ogbe 1709-S emeputa na Supplier |Ụba abụọ
Agba:Black + Red / Black + Blue
Ị nwere ike ịme Logo ahaziri ahazi?
Ee, anyị nwere ike ịme Logo ahaziri ahazi.
Kedu uru ngwaahịa anyị dị na ahịa?
1st mbụ rụpụta OED & ODM, 2nd mbụ imewe mbụ R&D, 3rd elu ọgwụgwụ àgwà & inogide, 4th ike ngwugwu.
Gịnị kpatara ịhọrọ ụlọ ọrụ anyị?
A na-emepụta ngwaahịa niile site na ma bupu ya na ụlọ ọrụ anyị na ọnụahịa asọmpi na njikwa mma a pụrụ ịdabere na ya.
Akwụkwọ CE & akwụkwọ ROHS & akwụkwọ FCC.
Anyị bụghị naanị ga-agbalị anyị kasị ukwuu na-enye pụtara pụtara ìhè ọrụ ọ bụla shopper, ma dịkwa njikere na-enweta ọ bụla aro awa anyị na-azụrụ maka High Quality China Factory Price Computer Desk Free Mouse Pad Modern RGB Gaming Desk for Gamer, Welcome to make contact with anyị ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị n'ime ngwaahịa anyị, anyị ga-enye gị nnukwu ọnụahịa maka Qulite na Uru.
High Quality China Computer Desk, Game Desk, N'oge na 8 afọ, Ugbu a, anyị abuana ke ihe karịrị 15 ngosi, na-enweta ndị kasị elu otuto si onye ọ bụla ahịa.Ụlọ ọrụ anyị na-achọ mgbe niile ịnye ndị ahịa ngwaahịa kacha mma na ọnụ ala dị ala.Anyị na-agbasi mbọ ike iji nweta ọnọdụ mmeri a ma jiri ezi obi nabata gị isonyere anyị.Soro anyi, gosi mma gi.Anyị ga-abụ nhọrọ mbụ gị mgbe niile.Tụkwasa anyị obi, ị gaghị ada mbà.
Nke gara aga: Nlereanya oche kọmpụta nwere ike imegharị ịdị elu eletrik Model HA-01
Osote: Ihe nlere oche Gamer 1501-3